Showing 101-120 of 3,655 items.
जसले जन्मदिनको अवसरमा गाउँ नै झलमल्ल पारे
धरान । मोरङको केराबारी&ndash;६ का दिलबहादुर पंधाक लिम्बूले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा ६० वटा सडक बत्ति जडान गरिदिएका छन् । उनले आफ्नो ४८ औं जन्मदिनको अवसर पारेर केराबारी&ndash;६ स्थित तेह्रथुमे टोलमा सडक बत्ति जडान गरेका हुन् । करिब ४ लाख�
मृगौला पिडितलाई गायिका हर्षुको सहयोग
धरान । मृगौला पिडित धरान ९ निवासि प्रविन राईलाई गायिका हर्षु राईद्वारा सहयोग प्रदान गरिएको छ । गायिका राईले मङ्गलबार आफ्नो जन्मदिन परेको अवसरमा मृगौला पिडित राईको उपचारको लागि नगद हस्तान्तरण गरेकि हुन । उनले उपचार खर्च स्वरु�
प्रकाशित मितिः कार्तिक 18, 2077
लन्डन (यूके) &divide; आदिवासी जनजाति समुदायको मौलिकताको पक्षमा विद्रोह गर्दा सहादत प्राप्त गरेको भन्दै यूकेका अभियन्ताहरूले रामलिहाङ र रिदामा आठपहरियाको स्मरण गरेका छन् । १५४ औँ रालिहाङ र रिदामा स्मृति दिवसका अवसर पारेर अभियन्ता�
धरान । भेडेटार नजिकै आज विहान सवारी दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा दुईजना घाइते भएका छन् । हिलेदेखि धरानतर्फ आउदै गरेको को १ ख २८२८ नम्बरको फोर्स गाडि र धरानबाट जादै गरेको को १ ज ३४५६ को बुलेरो ठोकिदा दुर्घटना भएको हो । फोर्सकाचाल�
3276 पटक पढिएको
धरान । पछिल्लो समय अर्गानिक खानपानमा सबैको ध्यान पुग्न थालेको छ । अर्गानिक खानाले मानव स्वास्थ्यमा धेरै फाइदा गर्ने भएपछि त्यसतर्फ सबै आकर्षित हुन थालेका हुन् । त्यसैको उपज स्वरुप पानवारीका भूपेन्द्र भट्टराईले केराबारीमा ह�
धरान । हाम्रो युवा समाजले धरानका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरेको छ ।समाजले धरान&ndash;५ का ५५ परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो । प्रति परिवार २० केजी चामल र १ पोका तेलका दरले बितरण गरिएको समाजका अध्यक्ष दिपक घिसिङले जनाउन�
‘चाडबाडमा कोरोनाको जोखिम बढ्छ, लापरवाही नगराैं सावधानी बढाऔं’
गृह मन्त्रालयले चाडबाडको समयमा कोभिड&ndash;१९ को सङ्क्रमण थप बढ्न सक्ने भएकाले सचेत रहन मातहतका सुरक्षा निकाय तथा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले यसको रोकथाम, �
‘परिर्वतनको पक्षमा धनकुटाका यूवा’
धरान । यूवाहरु परिवर्तनको संभावहक भएकाले धनकुटाका यूवाहरु पनि परिर्वतनको पक्षमा भएको हिजाे धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. १ निगालेमा आयोजित यूवा भेलामा यूवाहरुले वताएका छन । नेपाली कांग्रेस धनकुटाद्धारा आयोजना गरिएको तरुण भेल�
प्रकाशित मितिः कार्तिक 2, 2077
धनकुटाको व्यापारिक केन्द्र हिलेबजारमा अनुगमन तथा व्यवासाय संचालन सहजिकरण कार्यक्रम
धनकुटा, १ कार्तिक, धनकुटाको व्यापारिक केन्द्र हिले बजारमा आज धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघले आन्तरिक बजार अनुगमन तथा व्यावसाय संचालन सहजीकरण कर शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरेको छ । चाड पर्वको अवसरमा व्यापारी तथा उपभोक्ताहरु विचमा �
धरान &divide; आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा युमा धर्मलाई संस्थागत गराउन युमा साम्यो महासभाले आफ्नो गतिविधि तीव्र बनाएको छ । याक्थुङ(लिम्बु) समुदायको मौलिक एवम् पुरानो धर्म युमा साम्यो भएको दाबी गर्दै महासभाले जागरण अभियानहरू तीव्र बन�
विराटनगर, ३० असोज । विराटनगर जोगबनी नाकामा रहेको हातधुने स्टेशनविराटनगर महानगरपालिकाको वडा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विश्व हात धुने दिवस २०७७ को सन्दर्भमा मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च (फरेन)ले युनेस्कोको सहयोगमा निर
फेरी घट्यो सुनको मुल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ कति ?
नेपाली बजारमा सुनको भाउमा ओरालो यात्रा आज बुधबार पनि जारी रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबार सुनको भाउ तोलामा ६०० रुपैयाँ घटेको हो। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९४ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गो�
मोरङकाे रतुवामाई - १० मा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु
मोरङ, असोज २८ गते । मोरङ रतुवामाई-१० सातमेडी बस्ने २४ बर्षीय रविन लिम्बुको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ । हिजो अपरान्ह ४ बजे आफ्नै घर छेउमा मोटरजडान गर्ने क्रममा अचानक करेन्ट लाग्दा लिम्बु वेहोस भएका थिए । उनलाई तत्काल लाइफलाइन अ�
‘६५ औं प्रहरी दिवसका अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम’
विराटनगर,असोज २८ गते । ६५औ प्रहरी दिवस २०७७ को अवसर पारेर आज १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरको प्राङगणमा रक्तदान कार्यक्रयम गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मोरङ शाखा अन्तरगतको क्षेत्रीय रक्त सेवा विराटनगरको उपस्थित
धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघद्धारा आन्तरीक अनुगमन गर्दै व्यावसाय सचेतना तथा कर शिक्षा घर दैलो कार्यक्रम
धनकुटा । धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघले हिजाे देखी व्यावसाय सचेतना तथा कर शिक्षा घर दैलो कायक्रम संचालन गरेको छ । लक डाउनका कारण शिथिल रहेको व्यावसायलाई चलायमान बनाउनका लागी व्यावसाय सचेतना र करका वारेमा व्यावसायहरुलाई जानकारी
मृगौला पिडितलाई अधुरो सपना डटकमको सहयोग
धरान । पर्देशिको अधुरो सपना डटकमको तर्फबाट दुवै मृगौला पीडित मकवानपुर बकैया गाउँपालिका वडा नं। ४ पाङ्डुरे ९हेटौंडा० निवासी पुर्ण बहादुर भोलानलाई ५८ हाजार सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ । राज नेम्बाङ, युकेश नेम्बाङ, सुदिप गुरुङ,
पेशागत हक अधिकारका लागी शिक्षक एकजुट
धनकुटा । पेशागत हकि अधिकारका लागी शिक्षकहरु एकजुट हुनु पर्ने हिजाे धनकुटामा नेपाली कांग्रेस धनकुटा ले आयोजना गरेको शक्षिकहरुको समस्या र समाधान विषयक अन्र्तक्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक संघ धनकुटाका पदाधिकारी तथ�
इनरुवा। सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा नगरपालिका ६ मधेशाको यज्ञ बहादुर श्रेष्ठको रागां चोर्ने चोर पक्राउ परेका छन् । श्रेष्ठले चराउनको लागि किला ठोकी लामो डोरीले बाधि राखेको रागा मोरंङको बुढिगंगा गाउपालिका ४ का २६ वर्षिय राजेश रामल
कुटपिटबाट १ युवकको मृत्यु
मोरङ, असोज-१३ गते । भारत घर भई हाल उर्लाबारी-७ स्थितमा बस्दै आएका ३५ बर्षीय शुसिल मल्लिकको कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ । मल्लिकलाई उर्लाबारी-७ मै होटल संचालन गरी बस्ने २६ बर्षीय गोपाल तामाङले कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्�
मौद्रिक नीतिबारे छलफल
धरान । सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट होटल व्यवसायीहरुले के&ndash;कस्तो लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषयमा धरानमा एक अनुशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कोभिड १९ पश्चात् व्यवसायमा परेको दु�